(အင်္ဂလိပ်: a) အသေးဖြင့် အဂျိုင်း(လ်) (အင်္ဂလိပ်: agile) ဟုသုံးလျှင် ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးခြင်းတွင် ပြောင်းလဲရန် လွယ်ကူခြင်းနှင့် အပြောင်းအလဲ ကို လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်ခြင်းတို့ကို ယေဘုယျသဘောဖြင့် ရည်ညွန်းသည်။ (အင်္ဂလိပ်: A)အကြီးဖြင့် အဂျိုင်း(လ်) (အင်္ဂလိပ်: Agile) ဟုသုံးလျှင် အဂျိုင်း(လ်) ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးမှု ကြေညာစာတန်း  နှင့်အညီ သို့မဟုတ် အနည်းစပ်ဆုံး ကိုက်ညီသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးခြင်း ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ စကရမ်း နှင့် ကန်ဘမ် တို့အပါအဝင် ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးခြင်း နည်းလမ်းဘောင် အများအပြားမှာ ဤ ကြေညာစာတန်းမှ ပေါ်ထွန်းလာသော တန်ဖိုးများနှင့် နိယာမများ ကို အခြေခံကြသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အဂျိုင်းလ်မဟာမိတ် (အင်္ဂလိပ်: Agile Alliance) မှ ပေါ့ပါး သွက်လက်သော လက်တွေ့နည်းလမ်းများ၊ ဝေါဟာရများ၊ အခြေခံများ နှင့် ထိုအချက်များကို ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ ပေါ့ပါးသွက်လက်နည်း ကျင့်သုံးသူများ၏ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့်တကွ အတွေ့အကြုံလမ်းညွှန်များကို အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲထွက်ပေါ်လာမည့် ပွင့်လင်းရင်းမြစ် (အင်္ဂလိပ်: Open-source) လက်စွဲအဖြစ် အဂျိုင်းလ် လက်တွေ့လမ်းညွှန် (အင်္ဂလိပ်: Guide to Agile Practices) ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ ထိုလမ်းညွှန်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အဂျိုင်းလ် ဝေါဟာရများ (အင်္ဂလိပ်: Agile Glossary)ဟုအမည် ပြောင်းခဲ့သည်။
အဂျိုင်း(လ်) ဆော့ဖ်ဝဲရ်ဖန်တီးမှု အတွက် ကြေညာစာတန်း[ပြင်ဆင်ရန်]
အဂျိုင်း(လ်) ဆော့ဖ်ဝဲရ်ဖန်တီးမှု တန်ဖိုးထားချက်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
အထောက်အကူကရိယာများနှင့် နည်းစဉ်များသည် အရေးကြီးသည်။ သို့သော် ပို၍အရေးကြီးသောအချက်မှာ အရည်အချင်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များ ထိရောက်ပေါက်မြောက်စွာ အတူတကွ အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက် ရှိခြင်း ဖြစ်သည်။
အဂျိုင်း(လ်) ဆော့ဖ်ဝဲရ်ဖန်တီးမှု ဥပဒေသများ[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ Collier၊ Ken W. (2011)။ Agile Analytics: A Value-Driven Approach to Business Intelligence and Data Warehousing။ Pearson Education။ pp. 121 ff။ ISBN 9780321669544။ What isaself-organizing team?
↑ ၅.၀ ၅.၁ Larman၊ Craig (2004)။ Agile and Iterative Development: A Manager's Guide။ Addison-Wesley။ p. 27။ ISBN 978-0-13-111155-4။
↑ Martin, James (1991)။ Rapid Application Development။ Macmillan။ ISBN 978-0-02-376775-3။
↑ Kerr, James M.; Hunter, Richard (1993)။ Inside RAD: How to BuildaFully Functional System in 90 Days or Less။ McGraw-Hill။ p. 3။ ISBN 978-0-07-034223-1။
↑ Anderson၊ David (2005)။ Declaration of Interdependence။ 27 January 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 December 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အဂျိုင်း(လ်)_နည်းဖြင့်_ဆော့ဖ်ဝဲရ်_ဖန်တီးခြင်း&oldid=698516" မှ ရယူရန်